उपकरणपट्टी Webalta - यो के हो? कसरी ब्राउजरबाट उपकरणपट्टी Webalta प्यानल हटाउन?
उपकरणपट्टी Webalta - यो के हो र कसरी यसलाई हटाउन? अब हामी अक्सर मानिसहरू पनि थाहा छैन किनभने आफ्नो कम्प्युटरमा यो अनुप्रयोग कहाँ, यो मुद्दा सामना गर्नेछ।
कार्यक्रम उपकरणपट्टी Webalta - यो के हो?
स्थिति कल्पना तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा नयाँ कार्यक्रम स्थापित वा थप सफ्टवेयर स्थापना गर्न सहमत द्वारा तपाईं चाहनुहुन्छ साइट भ्रमण गर्नुभएको छ। खोज इन्जिन, तपाईं कहिल्यै थाह जो अस्तित्व - अब तथापि, आफ्नो मनपर्ने ब्राउजर को सुरूवात समयमा Webalta पूरा गर्दछ। हुन छैन डर - यो भयानक भाइरस छैन।
खोज बजार मा आफ्नो स्थिति, एक प्रतियोगी Yandex रूपमा सिर्जना गर्ने Webalta उपकरणपट्टी कार्यक्रम कम्पनी को सद्गुण द्वारा, बस आक्रामक आफ्नो सिस्टम प्रवर्द्धन गर्न बाध्य। यो अन्त गर्न, यो एकदम नैतिक छैन अभ्यासहरू लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं Webalta उपकरणपट्टी स्थापना गर्ने निर्णय भने, सबै ब्राउजर लागि गृह पृष्ठमा एक स्वचालित निर्धारण वेबसाइट ठेगाना हुनेछ।
यो पनि यस्तो निःशुल्क Avast र NOD32 रूपमा केही विरोधी-भाइरस सफ्टवेयर, एक अविश्वसनीय सफ्टवेयर वा भाइरस रूपमा Webalta-उपकरणपट्टी पहिचान उल्लेख गर्नुपर्छ र स्थापना रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले हामीले छोटकरीमा देख्यो, के कार्यक्रम Webalta उपकरणपट्टी को प्रकारको। तर, प्रत्येक को उपयोगिता को स्तर नै परिभाषित।
तपाईं Webalta उपकरणपट्टी स्थापित, तर उहाँले रोक छ भने तपाईं अहिले मुख्य रूपमा छान्नुभएको छ भने, मा स्रोत को पृष्ठ को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी हेर्न। ध्यान दिनुहोस् कि Webalta हटाउने - साँच्चै सरल छ।
आफ्नो ब्राउजर प्रकार को लागि तल तल साधारण चरणहरू, र पछि मात्र5मिनेट स्रोत "Vebalta" एक पीसी रूपमा लामो तपाईं यसलाई स्वामित्व रूपमा बाट वा सधैंभरि समय, छ हटाइयो फेरि थप्न छैन।
तपाईंको कम्प्युटरबाट Webalta स्रोत हटाउन, तपाईं यसलाई परियोजना को उपकरणपट्टीमा देखि खाली गर्नुपर्छ। यो अन्त गर्न, जानुहोस् कन्ट्रोल प्यानल, "कार्यक्रमहरू थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्।" जाने विन्डोज7चलिरहेको छ भने, तपाईं "सुरुवात" मेनुमा जानुहोस् पर्छ, त्यसपछि "कम्प्यूटर," खुला चलान "स्थापना रद्द वा कार्यक्रम परिवर्तन" (तपाईं विन्डो को शीर्ष को बीचमा पाउनुहुनेछ बटन)।
तपाईं पनि, "सुरुवात" मेनुमा जा "कन्ट्रोल प्यानल", वस्तु फेला जहाँ "कार्यक्रम", र यो मा सुरु गरेर नै परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन् - "एक कार्यक्रम अस्थापना" क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं "XP" प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, "सुरुवात", जाने "कन्ट्रोल प्यानल", जाने क्लिक "कार्यक्रमहरू थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्।" अर्को कार्य कम्पनी "माइक्रोसफ्ट" बाट सञ्चालन प्रणाली को सबै संस्करण लागि एउटै हो।
उपकरणपट्टी Webalta स्थापित आवेदन कार्यक्रम सूची फेला पार्न, क्लिक "हटाउनुहोस्।" यसबाहेक, उपकरणपट्टी हटाउन उसपछि सञ्झ्यालमा "Vebalty" बक्समा यो पूरक को ब्राउजर खाली गर्न जाँच गर्नुहोस्। संवाददाता कार्य विजार्ड को दोस्रो पृष्ठमा पाउन सकिन्छ।
यो तपाईं, उपकरणपट्टीमा तपाईंको कम्प्युटर सफा भने छैन त पुनः सुरु र नयाँ सुरु "Vebalta" ब्राउजर पुन: कन्फिगर नै हुनेछ गृह पृष्ठ अधिकार मा ब्राउजरमा, सबै निम्न तरिकामा लागू गर्न असम्भव छ, जो बिना जरूरी - सम्झना हो कि हटाउने Webalta उपकरणपट्टी आवेदन।
यो कुनै कुरा तपाईं अन्य तरिकामा यसलाई मेटाउन कति पटक हुनेछ। त्यसैले यसको उपकरणपट्टी देखि सिस्टम सफा गर्न हटाउने "Vebalty" को लागि प्रक्रिया सुरु, र त्यसपछि अर्को कदम अघि बढ्नु।
स्थापना रद्द नै कार्य यसलाई
यो को प्रश्नको जवाफ कि उल्लेख गर्नुपर्छ Webalta हटाउन कसरी उपकरणपट्टी, कार्यक्रम तल राखे। Webalta स्थापना हटाउने - आखिर, आवेदन त्यहाँ एक विशेष उपकरण हो। अक्सर यो मुख्य मेनु "सुरुवात" मा स्थापित अन्य कार्यक्रम बीच लुकेको छ। साथै, तपाईंले कम्प्युटर मा सबै डिस्क मार्फत खोज नाम webalta प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यस मामला मा, कार्यहरू को अनुक्रम निम्नानुसार छ: "सुरुवात" मेनुमा जानुहोस्, खुला "मेरो कम्प्युटर", कृपया खोज र Webalta एक शब्द प्रविष्ट गर्न शीर्ष दायाँ आगत फिल्डमा उल्लेख, र त्यसपछि प्रविष्ट गर्नुहोस्। यस फेला फाइलहरू बीच सफ्टवेयर स्थापना र हटाउने "Vebalty" खोज्नुपर्छ। तपाईं फेला यदि एक कार्यक्रम यो सेवा हटाउन, त्यसपछि तपाईँ यसलाई खोल्न आवश्यक छ। पहिलो, "मास्टर" दोस्रो रन बेला उपकरणपट्टी हटाउन हुनेछ पृष्ठ webalta.ru देखि देख्ने खाली गर्न सक्षम हुनेछ।
प्रदर्शन प्रस्तावित विकल्प मध्ये एक वा दुवै कम्प्युटर फेरि सुरु र सेवा सबै सुरू पृष्ठ समीक्षक हटाउन webalta कि जाँच गर्न पछि। यदि होइन भने, "Vebalty" को पृष्ठ सबै लेबल देख्ने सफा गर्न निम्न निर्देशन प्रयोग गर्नुहोस्।
सुरु पृष्ठ सफा गर्न काम
धूर्त खोज इन्जिन पनि आफ्नो मनपर्ने Columnists को लेबल मा लुकाउन सकिँदैन। ब्राउजर सर्टकटहरू को एक मा माउस राइट क्लिक, उसपछि मेनुमा "गुण" मा जानुहोस्। अर्को, स्ट्रिङ "वस्तु" र धेरै अन्त सम्म एक विशेष पाठ इनपुट क्षेत्रमा squandered उल्लेख, ट्याब "सर्टकट" प्रयोग गर्नुहोस्।
शायद, तपाईं त्यहाँ एउटा स्रोत या webalta.ru home.webalta.ru उल्लेख छ देख्नेछन्। "Vebalta" बुझाउँछ जो पाठ, को भाग हटाउने र लेबल गरिएका परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया तपाईंले स्थापित कि ब्राउजर को प्रत्येक लागि पटक-पटक हुनुपर्छ।
तपाईं Windows 7, मा सर्वसञ्चित ब्राउजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यपट्टी, तपाईं यसलाई त्यहाँबाट फिर्ता र सुरक्षित फेरि, यो कार्य एउटा सर्टकट "Vebalty" को यो ridding स्वतः पुन: सिर्जना हुनेछ गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाईं सर्टकटहरू ब्राउजर सुरु जाँच खर्च र अनावश्यक खोज इन्जिन हटाउने, ब्राउजर पुनः सुरु गर्नुहोस्।
आफ्नो गृह पृष्ठ अझै पनि खडा छ भने webalta.ru वेबसाइट वा यसको भेरिएसनहरूमा, ब्राउजर सेटिङहरू प्रयोग गरेर गृह पृष्ठ परिवर्तन। तथापि, यदि काम गर्दैन, निर्देशनहरू तल प्रयोग गर्नुहोस्।
Chrome बाट हस्तक्षेप सेवा हटाउँदै
पहिलो, अर्डर Google Chrome बाट निर्दिष्ट स्रोत हटाउन मा, निर्दिष्ट ब्राउजर बन्द गर्नुहोस्। ब्राउजर को निर्देशिका प्रयोगकर्ता सेटिङहरू मा जानुहोस्। यो गर्न, Chrome निर्देशिका चलाउन, त्यसपछि, प्रयोगकर्ता डाटा पछ्याउने अन्तमा, पूर्वनिर्धारित खोल्न, त्यहाँ आफ्नो कम्प्युटरमा गुगल फोल्डर खोज्न। निर्दिष्ट निर्देशिका प्राथमिकता फाइल खोजी र "नोटप्याड" प्रयोग गरेर यसलाई खोल्न।
फाइल सूची, नाम webalta को उल्लेख फेला पार्न र तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्।
प्राथमिकता फाइल बचत, र त्यसपछि ब्राउजर पुनः सुरु गर्नुहोस्। ब्राउजरमा गृह पृष्ठ सेट गर्नुहोस्। यो गर्न, जानुहोस् , एक नयाँ ट्याब खोल्न सेटिङ अनुप्रयोग र त्यहाँ "सुरुआतमा" मा इच्छित ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
मोजिला फायरफक्स कन्फिगर
यसलाई बन्द सुरु गर्न सबै "निमन्त्रणानगरिएकोजडान" को ब्राउजर हटाउनका लागि। को फायरफक्स प्रोफाइल निर्देशिका जानुहोस्। तपाईँको कम्प्युटरको मोजिला, फायरफक्स मा फोल्डर पत्ता लगाउन सूची मा यसलाई खोल्न र त्यहाँ बाट प्रोफाइल फोल्डरमा जानुहोस्। अर्को, यो prefs.js फाइलहरू, user.js र sessionstore.js पत्ता लगाउन। को "नोटप्याड" को प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई खोल्न।
कुनै user.js फाइल हो भने - किनभने फायरफक्स को नयाँ संस्करण को stead मा चिन्ता छैन, sessionstore.js प्रयोग। - मामला मा तपाईं तपाईं शायद छैन सूची मा, आएका छन्, एक .js फाइल फेला आवेदन डेटा। अन्य प्रोफाइल मा फाइलहरू खोज्न। फाइल सूची,, नाम Webalta को उल्लेख खोजें हटाउन उदाहरणका लागि, गृह पृष्ठ को ठेगाना यसलाई प्रतिस्थापन, ya.ru. को सम्पादन फाइल बचत, र त्यसपछि ब्राउजर पुनः सुरु गर्नुहोस्। ब्राउजरमा गृह पृष्ठ सेट गर्नुहोस्। यो गर्न, यो फायरफक्स मेनुमा जानुहोस् "सेटिङ" चयन गर्नुहोस्, "घर" उल्लेख, "सामान्य" क्लिक गर्नुहोस्। इन्टरनेट एक्सप्लोरर सेटिङहरू लागि, यो पनि बन्द गर्न सुरु गर्न आवश्यक हुनेछ। सुरु रजस्ट्री संपादक। यो गर्न, "सुरुवात" गर्न र "रन", प्रकार regedit मा जानुहोस्, र त्यसपछि प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि रजिस्ट्री वरिपरि खोजी प्रयोग गर्नुहोस्। हामी कसरी पहिले नै माथि वर्णन गरेको छ, मा समस्या समाधान गर्न, यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यहाँ हामी उपकरणपट्टी Webalta बारेमा प्रश्नको जवाफ - यो के हो र कसरी यसलाई हटाउन।
सपनामा माछा पकड - धनी वास्तविकता बन्न
Gynoid लिपोडिस्रोफी: कारणहरू, उपचार
ज्यामितीय woodcarving - रमाइलो गर्न ठूलो तरिका
"Vinilyuks" (वार्निश): आवेदन, फोटो परिणाम समीक्षाएँ। फाइदा र लाह को बुरा "Vinilyuks"
ऊन ज्याकेट: प्रकार, उद्देश्य र प्रयोग
GAZ-33081: कार विनिर्देशों
पकौडी 20 मिनेट borscht। राम्रो मुड लागि द्रुत नुस्खा